Abaguquli abahlanu abagqwesileyo beeleta ezintle | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lola ifani | | Imithombo, Ukuphefumlelwa, Izibonelelo
Ukuba ufuna iitekisi zakho kwiinethiwekhi zentlalo ukuba zibethe ngakumbi kwaye ziyile, kungumbono olungileyo ukuya kuguqulelo lweeleta ukuya fumana iifonti ezipholileyo kwaye oko, ngaphandle kwamathandabuzo, kuyakukwenza ugqame kwabanye. Kule posi siqokelele abona baguquleli ba-5 babalaseleyo beeleta ezintle ke unokufikelela kwiifonti ezintle. Yeka ukusebenzisa oonobumba abangagqibekanga kwaye wenze iitekisi zakho zibonise isitayile sakho!
5 Piliapp isiguquli
Amashumi amabini Yiyo Isiguquli esibonelela ngokufikelela kwiindidi ezahlukeneyo zeeleta ezintle kunye nokubetha kakhulu. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, phezulu kwiwebhu uza kufumana ibhokisi apho ungafaka khona isicatshulwa sakho. Xa usenza njalo, iya kugqitywa ngokuzenzekelayo kwiifomathi ezahlukeneyo ezikhoyo. Ukuba uskrolela ezantsi uza kufumana iqhosha lokulayisha ngakumbi iifonti Unee-alphabets ezingaphezulu kwamashumi amathandathu ezikhoyo! Xa ufumana uhlobo lohlobo olufanelekileyo kuwe, Kufuneka ukope kwaye uncamathisele.
Phantse yonke imithombo cIyahambelana neenethiwekhi ezinje nge-Twitter, i-Instagram, i-Facebook okanye i-WhatsApp. Nangona kunjalo, kukho ukusikelwa umda:
Isiguquli ayixhasi iileta ezinee-aksenti unobumba "ñ"
Akucetyiswa ukuba usebenzise izicatshulwa ezinde kakhulu, ezinje Ubuninzi imigca emi-2
Abanye abalinganiswa abaxhaswa ngamaqonga Zama ngaphambi kokuba upapashe!
Nguyenduy.com te ikuvumela ukuba uvelise izicatshulwa ezinomtsalane ngokukhawuleza nangokulula. Kuphela ngokukopa kunye nokuncamathisela onokutshintsha ifomathi emiselweyo ekruqulayo kunye neefonti ezinobuchule.
Isiguquli sinika iifonti ezingapheliyo zeendlela ezahlukeneyousebenzisa Iimpawu zekhowudi ezizodwa okanye i-Unicode. Ke ngoko, abaqhelekanga ukunika iingxaki ezininzi xa bephumeza kwinethiwekhi yoluntu, ukusukela kwayeInkqubo ayivelisi iisimboli ezintsha, kodwa idibanisa iisimboli Sele ikho ukwenza iifomathi ezizodwa.
Nangona kunjalo, ayisoloko isebenza. Ngamanye amaxesha, Amaqonga anjenge-Instagram, Facebook okanye iTwitter acoca ezi leta Ukuze abasebenzisi bangazisebenzisi gwenxa iisimboli ze-Unicode, ke bayazithintela ezinye, ke kubalulekile ukuba ujonge ngaphambi kokuzisebenzisa!
Inguqulelodresras.com Yiyo Umvelisi wenoveli kunye nefomathi yoyilo yokugcwalisa igqityiwe, iyonke inikezela I-alphabets ezingama-73 ezenziwe ngohlobo eyahlukileyo. Eyona nto intle malunga nale nkqubo kukuba, xa ujonge ifonti efanelekileyo, ungacoca ngesitayile. Unendidi ngeendidi ezikhoyo: cursive, handwriting, beautiful, rare, old ...
ukuba fumana isicatshulwa sakho kufuneka ufake into ofuna ukuyithetha kwibhokisi ephezulu kwesikrini kwaye ucinezele ukungena kwikhibhodi yekhompyuter yakho. Apha ngezantsi kuya kubonakala kuguqulwe ngokuzenzekelayo kwiifomathi ezahlukeneyo ezenziwe lolu tshintsho luhle lweeleta.
Guqula.com Yiyo Uhlobo lwejenreyitha evelisa iisimboli ze-unicode, eyenzelwe ngokukodwa ukuba ukope isicatshulwa sakho kwaye usincamathisele kwibhayiloji yakho, kwizithuba zakho okanye kwizimvo zakho. Usebenzisa ilula ngokulula, bhala nje isicatshulwa sakho njengoko uqhele ukwenza kwibhokisi emhlophe ebonakala phezulu kwiwebhu, apha ngezantsi uza kubona loo mbhalo ubhalwe kwezinye iindlela. Khetha eyona uyithandayo kwaye ucofe iqhosha elibomvu elithi "khuphela" Uya kuba nesicatshulwa ekulungeleyo ukwabelana ngayo kwiinethiwekhi zakho zentlalo!
El Piliapp isiguquli Ilula ngakumbi kunaleyo besiyibonile ngaphambili kwaye nangona uluhlu lweendlela ezinikezelwayo alunabubanzi, iluncedo kakhulu, kuba ikuvumela ukuba utshintshe ifonti yeetekisi zakho ngokukhawuleza, ikunike ukhetho phakathi kweefonti ezinokufundeka kwaye zihle. Ukuyisebenzisa kulula, kuya kufuneka ubhale isicatshulwa ofuna ukusiguqula kwisikwere esimhlophe, apha ngezantsi sikunika ukhetho phakathi kwezitayile ezininzi. Xa ucofa kuyo nayiphi na, Uya kubona ukuba ezinye zazo zinomahluko owahlukileyo. Unokukhetha phakathi:
Umbhalo webhola, Ukukwazi ukukhetha phakathi kwebhola emnyama nomhlophe.
Negrita, Iyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo: italic, serif, kunye ne-sans serif.
Iileta eziqalekisayo, ungabenza babe nesibindi ukuba uyafuna.
Iminqwazi emincinci, Ngamagama aphezulu.
Umbhalo osisikwere, Ukukwazi ukukhetha phakathi kwesikwere esimnyama nesimhlophe.
Uhlobo oludala lokuchwetheza, ikwafumaneka ngqindilili.
Isicatshulwa esisezantsi, unokuguqula imeko yokubhala.
Kwakhona, ngaphakathi kwewebhu uza kufumana iinguqu ezahlukeneyo kwizitayile ezithile. Ngaba unayo umgca wokuguqula umgca wangaphandle evumela ukuba unqumle izicatshulwa zakho okanye uzikrwelele ngeendlela ezahlukeneyo. Phezulu kwesikrini, uya kufumana ifayile ye- inguqu engabonakaliyo, ukuze wenze iitekisi ekunzima ukuzifunda, ezifanayo ne-inki engabonakaliyo kwi-iPhone. Okokugqibela, inikezela nge «Zalgo» isiguquli sombhalo elongeza iisimboli kunye noonobumba ngaphezulu nangaphantsi kombhalo wokuqala.
Njengakwezinye iinguqulelo ezihle zeleta, kule Kuya kufuneka ubhale isicatshulwa sakho, ukhethe isitayile kwaye ukope ibinzana eliguquliweyo ukuze uliphumeze kwiinethiwekhi zakho zentlalo Jonga ukuba iqonga liyabaxhasa bonke abalinganiswa!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iziguquli ezi-5 eziphambili zeleta